ह्वाइटहाउसमा बाढी !- विश्व - कान्तिपुर समाचार
(न्युयोर्क) — लगातार दुई घण्टाको मुसलधारे वर्षापछि वासिङटन डिसी क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेको छ । सोमबार बिहानको वर्षा र हावाहुरीले धेरै भूभाग प्रभावित भएका छन् । वासिङटन डिसीस्थित हृवाइटहाउसमा समेत बाढी पसेको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार वासिङटन डिसी क्षेत्रमा ३.४४ इन्च वर्षाको पानी जमेको छ । सन् १९५८ पछिको यो बढी हो । उक्त वर्ष वासिङटन डिसी क्षेत्रमा २.१६ इन्च पानी जमेको थियो ।
सोमबारको वर्षा र हावाहुरीबारे मौसम विभागले समेत भविष्यवाणी गर्न सकेनन् । मौसम विभागले यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना १ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएको थियो । अविरल वर्षापछिको बाढीले वासिङटन डिसी क्षेत्रका सडकहरु जलमग्न भएका छन् । सहरका मेट्रो ट्रेन स्टेसनमा समेत पानी पसेको छ । दुईवटा अन्डर ग्राउन्ड ट्रेन स्टेसनमा पानीको भेल पसेको थियो ।
विशेष त मोन्टेगोमेरी काउन्टी, नर्दन फेयरफक्स काउन्टी र आर्लिङटन काउन्टी वर्षा र हुरीले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । एनबीसी समाचारका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय र निवास हृवाइटहाउसको बेसमेन्टमा समेत पानी पसेको छ । जसकारण कर्मचारीहरुले पानीमा तैरिने भेस्ट लगाएर काम गरेका थिए । आर्लिङटनस्थित एक मलको पार्किग लटमा पानी पसेर बिजोग भएको समाचारमा उल्लेख छ । बाढी र हावाहुरीले डिसीका केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
रोनाल्ड रेगन नेसनल एयरपोर्टमा ३.४४ इन्चसम्म वर्षाको पानी जमेको मापन गरिएको छ । डिसी एरियामा वर्षाले सडक जलमग्न भएपछि सवारीसधानहरु घण्टौं जाम परे । सर्वसाधारणको भागभागको स्थिति थियो । धेरैलाई पानी जमेको स्थानबाट गाडीबाट उद्धार गरिएको थियो । आधा घण्टामै सडकमा १० इन्चसम्मको पानी जम्मा भएपछि सडकमा पानीले सानोतिनो नदीकै रूप लिएको थियो । डिसी मेट्रो क्षेत्रको भर्जिनिया, मेरिल्यान्डमा समेत वर्षाले आएको बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
यसैबीच, अमेरिकी अधिकारीहरुले हृवाइटहाउसमा रहेका ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, घोषणापत्र, संविधानलगायतका दस्तावेजहरू सुरक्षित रहेको जनाएका छन् ।
प्रकाशित : असार २४, २०७६ २१:२०
विषादीका कारण बाँझोपना, स्मरणशक्तिमा ह्रास, क्यान्सरलगायत स्वास्थ्य समस्या बढेको चिकित्सकको भनाइ
असार २४, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — चिकित्सक संघ र नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी परीक्षण गरेर मात्र तरकारी र फलफूल भित्र्याउन माग गरेका छन् । दुई संस्थाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विषादीको अत्यधिक उपभोगले मुलुकमा बाँझोपना, स्मरणशक्तिमा ह्रासलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढदै गएको औंल्याएका छन् ।
भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं ‘भेटनरी टक्सिकोलजी’ विज्ञ डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले तरकारी र फलफूल विषादीरहित पुष्टि नभएसम्म मुलुकमा भित्रिन दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘तरकारी आउने मुलुकको सरकारले जारी गरेको ‘फाइटो स्यानेटरी सर्टिफिकेट’ नेपालले खोजेको ढाँचामा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शंका लागे मुलुकभित्रसमेत जाँच्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालले क्वारेन्टाइन मापदण्ड पूरा गर्न पाउने बताए ।
एसोसिएसनका अनुसार विषादी परीक्षणले स्वदेशी कृषकलाई समेत कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोस्टको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी कडाइसाथ नियमन गर्न पनि एसोसिएसनले जोड दिएको छ ।
स्वदेशी कृषक, विषादी प्रयोगकर्तालाई समेत कुन बालीमा कहिले, कति पटक, कुन मात्रामा प्रयोग गर्नेबारे आधारभूत ज्ञान हुनुपर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । ‘हाम्रा किसानले सहजै विषादी पाउने परिपाटीसमेत अन्त्य हुनुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित विज्ञ, प्राविधिक वा जिल्लास्थित सरकारी निकायका अधिकृतले सिफारिस गरेका आधारमा मात्र विषादी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
प्रकाशित : असार २४, २०७६ २१:०६